पार्टीमा धाक देखाउने जो कोही पनि कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ -
अन्तरवार्ता प्रमुख फिचर समाचार राजनीति
२० श्रावण २०७६, सोमबार ०६:१५ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on पार्टीमा धाक देखाउने जो कोही पनि कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ
महिलाहरुको हकहितका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत, महिला संघको सुर्खेत जिल्ला, सदस्य, अध्यक्ष हुँदै चारपटक केन्द्रीय सदस्यपश्चात कोषाध्यक्ष बन्नु भएकी कुसल नेतृ जानकी सिंहसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकका संवाददाता एलबी विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
महिला संघले के गरिरहेको छ ?
महिला संघ कांग्रेको अन्य समितिहरुभन्दा सक्रिय समिति हो । अन्य समितिहरुझैँ विवादमा फस्ने, आन्तरिक गुटहरुका कारण आफैँमा कमजोर देखिने समिति होइन । हामी अहिले सक्रिय रुपमा संगठन विस्तारमै लागिरहेका छाँै । गाउँघरमा पुगेर दिदीबहिनीहरुका समस्यालाई उजार गर्न हामी लागिपरेका छौँ । यस्तै महिला विकासका निम्ति सभा, समारोह, गोष्ठीजस्ता कुराहरु पनि हामीले गरिरहेका छौँ । पार्टीभित्र पनि महिलाहरुको वर्चश्व बढिरहेको छ । अहिले हेर्ने हो भने करिब ५१ प्रतिशत महिलाहरु पार्टीमा सक्रिय देखिन्छन् । महिला संघले जबसम्म शीर्ष नेतृत्वमा महिलाहरु पुग्दैनन्, तबसम्म मुलुकको विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले ठम्याइसकेका छौँ । विकास निर्माण र समृद्ध नेपालमा निर्माणमा महिलाहरु इमान्दारका साथ लागिरहेको राजनीतिक स्तरले विर्सिनु हुँदैन । महिलाहरुको सक्रियताले भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुका साथै सुशासन कायम गर्न सक्नेछन् ।
यहाँले भन्नुभयो अन्य समितिहरु जस्तो गुट हाम्रोमा देखि“दैन । के गुटहरु नभएकै हो त ?
यो राजनीतिक कुरा हो । लोकतान्त्रिक पार्टीहरुमा गुट उपगुट हुनुलाई सामान्य ठानिन्छ । यो हुनुपर्छ पनि । हाम्रो समितिमा पनि छ । राजनीतिमा कहिले दरार आउनु, कहिले नेतृत्वको होडबाजी हुनु यो स्वभाविक कुरा हो । मान्छेहरु आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न चाहन्छन् । जसका कारण आफू बलियो बन्नका निम्ति आफ्नो पछाडि हैँसेमा हैँसे गर्ने मान्छे त चाहियो नै, हो यहि कारण गुट उपगुटहरु बन्न जान्छन् । यो कुनै पार्टीमा फरक विचार भएको संगठन पक्कै होइन । नेतृत्वको लागि हो । यस्तै पार्टीभित्र उपगुट हुनु प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि हो ।
डडेल्धुरामा कांग्रेस नेताले नै महिल संघका नेतृहरु पिट्नभयो । तर, केन्द्रीय महिलासंघ मौन बस्यो किन ?
यसरी महिला नेतृमाथि हातपत गर्नु भनेका महिला हिंसा हो । कुनै पनि महिलामाथि यसरी हातपात गर्नुहँुदैन । महिला संघ डडेल्धुराको तेस्रो अधिबेशन समयमा सम्पन्न हुन सकेको थिएन । पुरानो अध्यक्ष र नयाँ अध्यक्षको प्रत्यासी रहनु भएका कमला बिष्टले समितिमा कुरै नगरी आफैँ म अध्यक्ष भएँ भनेर घोषणा गरेपछि यो समस्या सिर्जना भएको हो । हुनत उहाँ राजनीतिमा राम्रो मान्छे पनि हो । र, सक्षम मान्छे पनि हो । तर, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा अध्यक्ष हुनका लागि धेरै महिलाहरुको चाहना थियो । त्यसबेला सोही कारणले अधिबेशन स्थागित भएको थियो । यस्तो अवस्थामा अधिबेशनबाट म आइसकेँ भनेर आफैँले आफूलाई नै अध्यक्ष घोषणा गर्नुभयो । यसरी आफैँलाई एकल अध्यक्ष घोषणा गरेपछि केन्द्रले स्वीकार गरेको थिएन् । केन्द्रले प्रतिनिधि पठाएर यसबारेमा जाँचबुझ ग¥यो । तर, त्यहाँ बैठक नबसेको, अन्य सदस्यहरुले अध्यक्ष स्वीकार नगरेको देख्दा उहाँलाई आधिकारीक होइन भनेर तदर्थ समिति गठन गरेको बेलामा केन्द्रको निर्देशन नै लत्याएर म आधिकारिक हुँ । भनेपछि उहाँलाई ३ वर्षका लागि महिला संघबाट निष्काशित गरिएको छ । उहाँ फरि पनि महिला संघका आबद्ध हुन चाहनु भयो र आफूलाई सुधारेर आउनु भयो भने हामी स्वागत गर्न तयार छौँ । यो एउटा पद्धति हो । विधिको शासनमा हामीले नेतृत्व पंक्तिलाई ल्याउन खोजेका छौँ । प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने नेपाली कांग्रेस त्यसको भ्रातृ संगठनले विधान स्वरुप कारबाही गरेको छ । फेरि हंगामा गरेको खण्डमा कडा कारबाहीको भागेदारी हुनुपर्नेछ । राजनीतिमा कहिले पदमा बस्नु, कहिले सामान्य सदस्यको रुपमा बस्नु यो सब कुराहरु भइरहन्छन् । यसका लागि नेतृत्वले धैर्यता पनि गर्न सक्नुपर्छ । संगठनमा निरन्तरता बढी नै हुनपर्छ । उतार चढाव गर्दा पदीय जिम्मेवारी पाइँदैन र जनताले समेत त्यस्तो नेतृत्व स्वीकार गर्दैनन् ।
पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्ने मान्छेलाई कारबाही गर्दा संठगन कमजोर पर्छ भन्ने लाग्दैन ?
यहाँ कमजोर बन्नुपर्ने जस्तो देखिँदैन । यो पार्टीको नियम हो । पार्टीको नियमको पालना नै नगर्ने व्याक्तिलाई कारबाही गर्नै पर्छ । पार्टीभित्र सुशासनका कुराहरु छन् । नियम कानुनहरु छन् । हाम्रो संगठनको पनि छुट्टै नियमहरु हामीले निर्माण गरेका छौँ । त्यसको सीमा पार गरेमा कारबाही गर्ने प्रणाली हामीले निर्माण गरेका छौँ । यदि कसैले पनि नियम बाहिर रहेका काम गर्छ भने सजायको भागीदारी हुनै पर्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई हामीले कदापि छाड्दैनौँ । म केन्द्रको कोषाध्यक्ष हुँ । मैले केन्द्रीय जिम्मेवारी पाएको छु । मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भनेर मनोमानी गरेँ भने र पार्टी, संगठनको नियमभन्दा बाहिर गएँ भने मैले पनि कारबाहीको भागीदार हुनैपर्छ । महिला संघको आफ्नै विधान छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेस अन्य पार्टीहरु जस्तो होइन । कानुन, विधान मान्ने पार्टी हो । जनताले सोही कारणले कांग्रेसलाई रोजका छन् ।
यो पहिलोपटक हो ?
यो होइन । विगतमा पनि यस्ता धेरै घटनाहरु छन् । हामीले धेरैलाई यो भन्दा पहिले पनि कारबाही गरिसकेका छौँ । म आफैँ पनि कारबाही परेको छु । जब महिला संघ सुर्खेतको अध्यक्ष थिएँ । त्यसबेला आदरणीय नेता स्वर्गीय सुशील कोइरालाले मलाई पार्टीको नेताहरुको भनेको नमाने भन्दै कारबाही गर्नुभएको थियो । तर, मैले बुझ्दा कुनै पनि कम्प्लेन्ट थिएन । राजनीतिमा उतार चढाब भइरहन्छ । म पनि त्यसैको सिकार भएको थिएँ । तदर्थ समिति गठन गरेर अध्यक्षबाट फालिएको थियो । म निरन्तर पार्टीकै पंक्तिमा बसेर महिला संघमै काम गरेँ । त्यो तदर्थ समितिलाई समेत नयाँ समिति गठनमा सहयोग पु¥याए । त्यो त्याग र बलिदानीका कारण अहिले म चारपटक केन्द्रीय सदस्य भइसकेको छु । म कान्तासिंह मानन्धरको पालाको केन्द्रीय सदस्य, मंगला माँको पालामा जिल्ला अध्यक्ष भएँ । स्वयं चारपटक केन्द्रीय सदस्य भएर आज केन्द्रीय सदस्य भएँ । पार्टीमा जसले म नै सर्वस्व हुँ भनेर पार्टीको विधान, नीति नियमभन्दा आफूलाई माथि ठान्ने सामन्तवादी सोच भएका व्यक्तिहरु हुन्छन् । उनीहरुलाई कारबाही गरिनु आवश्यक छ । यस्तै समस्याका कारण धेरैपटक तदर्थ समिति गठन गरिएको छ । जस्तै, गुल्मी, रुपनदेहीलगायत अन्य थुप्रै जिल्लाहरुमा अराजक काम गरिरहेका पार्टी नेतृत्वहरुलाई कारबाही गरिएको छ । यो उहाँलाई मात्र पहिलोपटक होइन । हरेकले यसलाई स्विकार गरेर भोलि अध्यक्ष बन्ने लक्ष्यका साथ फेरि दौडधुपमा जुट्नु भएको छ । तर, म जस्तो सक्षम मान्छे कोही छैन भनेर धाक लगाउनेहरुलाई भने कारबाही प्रक्रिया थाल्नै पर्छ । पार्टीको सुधार नेतृत्वको क्षमताको एक परीक्षा घडी पनि हो यो ।
फरक गुटका कारण उहा“लाई पार्टीले कारबाही गरेको त होइन कतै ?
होइन । बरु यो त नयाँ सुरुवात भन्नु पर्छ । आजसम्म कांग्रेसमा आफ्नै गुटको नेतालाई नेतृत्वमा ल्याउने, आफ्नै गुटलाई नै सर्वस्व ठान्ने प्रवृत्ति थियो । तर, अहिले यसमा सुधार भइसकेको छ । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको साथ पनि हामीले पायौँ । कारबाही गरिएकी नेतृ हाम्रै देउवा प्यानलको हुनुहन्थ्यो । उहाँ फरक गुटको मान्छे होइनन् । अब यसलाई कांग्रेसभित्र अन्य फरक गुटका मान्छेहरुले समेत स्विकार्न आवश्यक देखिन्छ । यसको लागू सिघ्र रुपमा पार्टीको हरेक नेतृत्वले गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ । यो पाठ महिला संघले सिक्नुपर्छ । धेरैले यसैलाई एउटा मुद्दा बनाएर पार्टीको बेइज्जत गर्ने प्रयास नगरेकै राम्रो हुन्छ । मैले तामाकोशी सन्देशमार्फत यो जानकारी कांग्रेसमा आस्था राख्ने हरेक नेपालीलाई जानकारी दिन चाहन्छु ।
विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित महिलाहरुको उपस्थिति मात्र देखिन्छ । निर्णायक बन्न सकेका छैनन् । उनीहरुलाई सक्षम तपाईको संगठनले के गरिरहेको छ ?
अहिलेको अवस्था हेर्दा यस्तै देखिन्छ । यो केन्द्र सरकारमा मात्र होइन । महिला वडा सदस्यदेखि लिएर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा समेत यो समस्या छ । महिलाहरुलाई यस्तो दयनीय अवस्थाबाट माथि उठाउनका लागि महिला संगठनहरुले प्रशिक्षण दिने, पहिले त राज्यको हेर्ने दृष्टि नै गलत छ । सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारका लागि पनि महिलाहरु नेतृत्वमा पुग्न आवश्यक छ । हामीले प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरुलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ ।
प्रतिपक्ष कमजोर देखियो नि अहिले ?
नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरुजस्तो ढुंगामुढा हान्ने, रोलिङ तोड्ने र विकासका संरचना भत्काउने जस्ता उछृंखल काम गर्दैन । हामीले जे कुरा गर्छौँ संसदबाटै गर्छौँ । अहिले त कांग्रेसले सडकमा आउन आवश्यक नै छैन नी । जनता आफैँ सडकमा आइरहेका छन् । यसैले हामी सदनमा आवाज उठाइरहेका छौँ । अहिलेको सरकारले ल्याएका प्रत्यक विधेयकहरु विवादित बन्दै गएका छन् । गुठी विधेयक जनदवाब पछि फिर्ता भयो । त्यहाँको केही दिन नपुग्दै फेरि लोकसेवा आयोगले संविधानविपरीत निकालेको विज्ञापन सरकारले नै सदर गरायो । यसका लागि अहिले जनता सडकमै छन् । हामीले सडकमा आइरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो सरकार त गरिबमारा, दलित, महिला, आदिबासी, जनजाति, मधेसी र थारुहरुको अधिकार खोस्न आएको सरकार हो । हिजोको विप्लवकै अवस्था हेरौँ न । सरकारको समर्थन नगर्दा, कुटपिट सहनु परेको छ । यसैले हामी प्रजान्त्रिक विचारधारको पार्टी हौँ । सदनमा सभ्य तरिकाले हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ । हामी यसमा सफल हुन्छौँ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु । निर्मला पन्तजस्तो गरिबको छोरीले न्याय पाएनन् । हिजो हाम्रा नेताले भन्नुहुन्थ्यो, कम्युनिस्ट सरकारको पालामा महिलाहरुमाथि शोषण हुन्छ, अन्याय हुन्छ, राजनीतिमा महिलाहरु आउन पाउँदैनन् । अहिले यो सरकारले त्यो कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ ।
‘खेलकुद महासंघले खेलाडीको सुविधाको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउने छ’
९ भाद्र २०७८, बुधबार १२:३० Tamakoshi Sandesh
१५ बैशाख २०७८, बुधबार ०३:५४ Tamakoshi Sandesh